प्रेरक प्रसङ्ग Archives - मूल्याङ्कन अनलाइन
हतारमा एकता गरेर भोलि पश्चाताप गर्नुभन्दा घनिभूत छलफल गरेर दुबै पार्टीबीच एकता : प्रचण्ड
वैशाख २८, बर्दिवास नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्रबीच चाँडै पार्टी एकता हुने बताउनुभएको छ । वामपन्थी नेता बितेका निर्मल लामाको १८ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानले हिजो यहाँ आयोजना गरेको ‘निर्मल लामा र नेपाली वामआन्दोलन’ विषयक प्रवचन कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “हतारमा एकता गरेर भोलि पश्चाताप गर्नुभन्दा घनिभूत छलफल गरेर दुबै पार्टीबीच चाँडै एकता हुनेछ ।” अध्यक्ष प्रचण्डले “एकतामा संसय नपाल्नुहोस्, हामी दरिलो र दिगो एकीकरणका लागि राम्ररी मन माझेर एकता प्रक्रिया अघि बढाइ रहेका छौं” भन्दै एकीकरणका लागि अब कुनै खास विषयमा अड्चन नरहेको बताउनुभयो । नेकपा एमालेकापूरा पढ्नुहोस्
दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि रु. १ करोड बराबरको जग्गादान
मंसिर ३, पोखरा दृष्टिविहीन बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–१४ का एक दम्पतीले रू. १ करोड मूल्य पर्ने जग्गा दान गरेका छन् । स्थानीय भीमपूरा पढ्नुहोस्
प्रेरक प्रसङ्ग : ‘सबैले पालो कुरौं !’
ग्रिगोरी इवानोविच इवानोब कुरा, सन् १९२१ को हो । म कामको सिलसिलामा पहिलोपटक मस्कोको क्रेमलिन सहर पुगेको थिएँ । दाह्री खौरिनका लागि म एउटा सैलुनमा गएँ । त्यहाँ हामी ६पूरा पढ्नुहोस्
विद्यालयमा शौचालय नभएपछि छात्राले आफैं बनाए शौचालय
असोज २६, बझाङ विद्यालयमा शौचालयको अभाव भएपछि छात्राहरु मिलेर शौचालय निर्माण गरेका छन् । छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका–६ मा रहेको मजखोरी माध्यमिक विद्यालयका छात्राले ढुङ्गा, काठ र पानी आधा घण्टा टाढाको बाटोबाटपूरा पढ्नुहोस्
प्रकाश धौलाकोटी असोज ५, तेह्रथुम तेह्रथुमको सोल्मामा जन्मिएर हाल अष्ट्रेलियामा कार्यरत राधिका पोखरेलले जन्मभूमिको सेवाका लागि रु. १.५ करोडभन्दा बढी खर्च गरेकि छिन । सानै उमेरदेखि गीत–संगीत र समाजसेवामा रुचिपूरा पढ्नुहोस्
असोज ५, पथरी (मोरङ) मोरङको उर्लाबारी–४ की निरु चौहानले ‘निरु घरेलु ढाका उद्योग’ सञ्चालनमा ल्याएपछि निरुजस्ता थुप्रै उद्यमशील महिलाले काममात्र पाएका छैनन् ढाका कपडा, जहाँ जुन भूगोलमा बुनेपनि गुणस्तरीय भएपूरा पढ्नुहोस्
असोज ३, काठमाडौँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत भन्दामाथि पुगेको छ । सरकारले आयोजनाका लागि हरप्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउँदै तोकिएको समयभन्दा पहिले पूरा गरेपूरा पढ्नुहोस्
भदौ २८, सुरुङ्गा (झापा) । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक फूलकुमारीको लागि जिवन दान दिने मिध्यम बन्न सफल भएको छ । सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग भइरहेका बेला केहीले भने यसलाई समाज सेवाको माध्यमपूरा पढ्नुहोस्
अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोगशालाको विकास गर्नुपर्ने
भदौ २५, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालभित्रै एक अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोगशालाको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान(नास्ट) को ४०आैँ प्राज्ञ सभालाई आज सम्बोधन गर्दैपूरा पढ्नुहोस्
प्रत्येक शनिबार मनोहरा खोलाको सफाइ गरिने
भदौ २५, भक्तपुर । जथाभावी फोहोर फाल्ने र खोला अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेपछि भक्तपुर र काठमाण्डौँको सिमाना भएर बग्ने मनोहरा खोलाको संरक्षण र सफाइ अभियान सुरु गरिएको छ । मनोहरापूरा पढ्नुहोस्